019 IRenti yeApartment enephuli yoluntu kunye nedolophu - I-Airbnb
019 IRenti yeApartment enephuli yoluntu kunye nedolophu
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguBlauhouse
UBlauhouse unezimvo eziyi-523 zezinye iindawo.
I-Apartment ye-55 m2, enamagumbi amabini, umthamo wabantu aba-5, kunye ne-terrace kunye ne-communal pool.
Amagumbi enye enebhedi ephindwe kabini kunye nenye enebhedi enkulu, yonke ingaphandle, igumbi lokuhlambela elinebhafu, igumbi layo lokuhlala line-tv (yeSpanish), ibhedi yesofa enye kunye nokufikelela ngokuthe ngqo kwi-terrace yayo epholileyo enefenitshala yegadi ejonge echibini kunye nolwandle.
Ikhitshi layo langoku elinesitovu seceramic, lixhotyiswe ngefriji, umenzi wekofu, umatshini wokuhlamba izitya, umatshini wokuhlamba, i-oveni, i-microwave, isitya / isitya kunye nekhitshi.
Iqula lijikelezwe sisitiya soluntu kwaye liyasebenza ukusuka ngo 06/16 ukuya ku 09/16.
Igaraji kwisakhiwo esifanayo.
Ekufikeni kufuneka uhlawule irhafu yabakhenkethi (uMthetho 5/2012) 1.00 € / umntu / usuku ubuninzi beentsuku ezi-7 (ngaphezu kweminyaka eyi-16).
Umbuki zindwendwe ngu- Blauhouse
Inombolo yomthetho: HUTG 027141
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Llança